Dhalasho Wacan Quruxleyda Bollywoodka Sonali Bendre Iyo Macluumad Dhamestiran Oo Xidigtan Ku Saabsan (Warbixin Muhiim Ah) – Filimside.net
Dhalasho Wacan Quruxleyda Bollywoodka Sonali Bendre Iyo Macluumad Dhamestiran Oo Xidigtan Ku Saabsan (Warbixin Muhiim Ah)
Sonali Bendre waa mid kamid ah atirishooyinki 90kii ugu quruxda badnaa,waxayna sameysa aflaam caan ah, kuwaaso ay xidig la aqoonsado ku noqotay waxayna dhalatay 1 Jan 1975 waxayna jirsatay maanta 44 sano.
Sonali Bendre waxaa ay keentay wax ka badan 50 filim oo jaceel ,dagaal iyo maadadaalaba leh waxaana filimadeeda kamid ahaa DILJALE oo micnihiisa uu yahay qalbi holcay waxaana ay la keentay Ajey Devgan.
Sonali Bendre hada waa 43 jir laakiin maxey waayaheedii hore waa ay qurux badneyd,fadlan halkaan hoose kaga bogo macluumad xidigtaan ku saabsan.
Sonali Bendre Iyo Waxyaabaha ay xiiseyso:
1-Cunada ay xiiseyso ama ay jeceshahay waxaa kamid ah cunista hilibka doorada ama digaaga.
2- Wax la cabo waxay ugu jeceshahay Coffee-ga waana cabisteda oo dhan Coffee la’aan ma joogi karto xidigtaan.
3-India dhaxdeda magaalada ay ka jeceshahay waa Mumbai waana halka ay India ugu xiiseyso.
4-Atoorayasha ay Bollywoodka ka taagerto waxay kala yihiin Amitabh Bachchan, Ajay Devgan and Akshay Kumar.
5-Atirishooyinka ay Bollywoodka ka taagerto waxay kala yihiin Madhubala, Madhuri Dixit and Tabu.
6-Aflaamta ay Bollywoodka ugu jeceshahay waxay kala yihiin Lagaan, Taare Zameen Par and Kabhi Alvida Na Kehna.
7-Heesayaasha ama fanaaninta ay Bollywoodka waliged ka jecleyd waxay kala yihiin Sonu Nigam and Kumar Sonu.
8-Labiska ay ugu jeceshahay inee xirato waa dharka hidaha iyo dhaqanka India xirtaan sida Saree iyo wixii soo raaco balse xafladha dhar shidan ayee ku aadaa iyo markii lagu amro inee dhar gaa gaabn xirato sida marke film sameyneso ama Fashion.
9-Filmsameyaalka ay Bollywoodka ugu jeceshahay waxay kala yihiin Karan Johar, Anil Sharma and Abbas Mustan.
10-Sports-ka dhankiisa waxay aad oga heshaa daawashada ciyaaraha cricket-ka.
11- Xiliyada ay fasaxa tahay waxay jeceshahay inee dalxiis u aado goobaha kala ah Paris and Dubai.
12-Midabada ay aadka u jeceshahay waxay kala yihiin Casaanka, Cadaanka iyo Buluuga.
Fadlan Nala Daawo Heesihii Ugu Wanaagsana Abid Laga Xasuusan Doono Xidigtaa:
Sxb sunali ma kansar baa kudhacay
haa walal mudo ayee New York daawo ku qaadaneysay hader wey soo kabaneysaa caafimad ahaan..